Archive du 20180130
Olga Vaomalala, vadin’i Alain Ramaroson Voatendry ho mpanolotsain’ny filoha
Notendrena ho anisan’ny mpanolotsain’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ny minisitry ny mponina sy ny raharaha sosialy tamin’ny andron’ny tetezamita Olga Vaomalala Ramaroson, vadin’i Alain Ramaroson.
Ravalomanana tao Mahitsy sy Ankazobe Makotrokotroka ny fandraisana azy
Taorian’ny tany amin’ny faritra Atsimon’ny Nosy iny, dia tany amin’iny lalàm-pirenena faha-4 iny indray no notsidihin’i Marc Ravalomanana.
Jacob Zuma –filohan’i Afrika Atsimo Mananontanona ny fanonganana azy
Ho tonga eo amin'ny tsotsorimamba isarahana angamba ny filoham-pirenena Jacob Zuma sy ny firenena Afrika Atsimo raha izao no mitohy.
Fampandrosoana an`i Madagasikara Tsy mahavaha olana ny fitondrana
Amin`izao fotoana izao no tokony hanehoana fa tsy mahomby sy tsy mahavaha olana eto amin`ny firenena ity fitondrana Rajaonarimampianina ity. Efa miverina tan-dalàna indray vao tena mikaikaika ny vahoaka.
Rajaonarimampianina sy Rajoelina Vaky bantsilana ny lainga
Malaza indray izao ny famoahana programa sy vina ambara fa hampandrosoana an’i Madagasikara ataon’ireo mpanao politika lehibe. Nanao ny azy ny filoha ankehitriny Hery Rajaonarimampianina sy ny filohan’ny tetezamita teo aloha Andry Rajoelina, izay tsy mifanalavitra sy toa nifangala-tahaka mihitsy aza angamba.
Mpandoto rano ao amin’ny fitondrana Mila zahana, hoy i Lita Rabetsara
Raha nanao fanadihadiana ny fikambanan’ny mpiaro ny zon’ny mpanjifa na ny RNDC dia nambaran’ny mpivarotra sasany fa efa miezaka ny minisitry ny varotra.
Boriborintany faha-2 sy ny mpomba an-dRavalomanana Nifampiarahaba nahatratra ny taona niaraka tamin’ny depiote Rastany
Nifamotoana teny Ambohipo nifampiarahaba noho ny fahattrarana ny taona 2018 ny mpikambana TIM ao amin’ny boriborintany faha-2 sy ireo mpomba ny prezidà Ravalomanana nahatratra 2000 olona ka ny depiote
Fanavotana sy fanavaozana Vinavina sy fanandratana. Kabary be tsy misy farany Na teto an-toerana na tany Ivelany.
Entana vita Sinoa Hihena ny gaboraraka
Omaly no natao tetsy amin`ny hotely Carlton ny sonia fifanarahan`ny firenena sinoa sy ny Ofisy Malagasy izay mifehy ny fananana ara-Indostria (OMAPI) momba ny fitehirizana sy ny fiarovana ny marika sy ny anaram-barotra eto Madagasikara.
Avaratetezana - Ampitatafika Miha mahazo vahana ny olan’ny fananantany
Mihamahazo vahana hatrany ny olana momba ny fananantany eto amintsika.
“Vitre fumée” ho an’ny fiara Manjaka ny tsy ara-dalàna, 50.000 Ar ny manao azy
Voarara tanteraka teo aloha teo ny fanaovana ireny fitaratra tsy tantera-pahazavana “vitre fumée” ireny ho an’ireo fiara tsy nahazo alalana. Lasa gaboraraka ny fanaovana azy ankehitriny.
Fampiroboroboana ny fizahantany Hiara-kiasa ny fanjakana sy ny Airtel
Mba hahafahana mampiroborobo ny sehatry ny fizahantany eto amintsika ka hanasongadinana ireo toerana ahitana karazan-java-maniry sy biby hananantsika tsy fahita any ivelany dia hikarakara fifaninanana ho an’ny olom-pirenena rehetra ny fitondram-panjakana amin’ny alalan’ny minisiteran’ny fizahantany sy ny orinasam-pifandraisana Airtel.
Any amin’ny 4.000 km miala ny morontsirak’i Madagasikara no nisy ny foiben’ilay rivo-doza Cebile omaly, raha araka ny fanazavana azo teo anivon’ny sampana mpamantatra ny toetr’andro.
Ivontoerana mpandinika ny fihetsiky ny tany (IOGA) Notapahana hatramin’ny oktobra 2017 ny jiro
Nisehoana horohorontany tany tany amin’ny faritra Antsirabe omaly vao mangiran-dratsy tokony ho tamin’ny roa maraina. Toerana maro toa an’i Betafo hatrany Ambositra no niantefany.
Tsipy kanetibe « Triplette Boss » Amin’ny 3 sy 4 febroary ny dingana faharoa
Ekipa olon-telo miaraka (Boos 1 sy Elites 2) niisa 34 no nandray anjara tamin’ny dingana 1 amin’ny “qualification 8è Star Master Thailande de pétanque” notontosaina tetsy amin’ny boulodrome CBT Mahamasina ny sabotsy 27 sy ny alahady 28 janoary 2018.
Tontosa tamin’ny an-tsakany sy an-davany ireo lalao rugby ampahavalon-dalana andiany faharoa nokarakarain’ny seksiona Antananarivo Renivohitra notontosaina tetsy amin’ny kianja Malacam Antanimena ny alahady 27 janoary 2018 teo. Tontosa tamin’ny an-tsakany sy an-davany ireo lalao rugby ampahavalon-dalana andiany faharoa nokarakarain’ny seksiona Antananarivo Renivohitra notontosaina tetsy amin’ny kianja Malacam Antanimena ny alahady 27 janoary 2018 teo.
Ampoizo ny tsy nampoizina !
Samy velom-panontaniana ny rehetra hoe inona no hiseho eto amin’ny firenena ato ho ato amin’ity resaka politika ity? Iza marina no ho kandida ary iza sy iza no hifanohana? Samy miandry ny rehetra, ary efa isan’ny niteraka resa-be ny momba ny mety hisian’ny fifanohanana eo amin’ny heverina fa ho kandida lehibe roa, dia i Marc Ravalomanana sy Andry Rajoelina.
Taksibe mihazo an’ Itaosy Nitokona tsy nety niasa ny ankamaroany omaly
Nitokona tsy nety niasa avokoa ny ankamaroan’ireo taksibe mihazo an’i Itaosy toy ny zotra 133 mampitohy an’Analakely sy Itaosy, ny KOMIFI sy ny KOMAFILA omaly.
Tetezana tapaka any Ambatofinandrahana Tsy raharahiana satria MAPAR ny depiote?
Mametra-panontaniana ny mponina hoe raha HVM ve ny depiote voafidim-bahoaka tao Ambatofinandrahana Christine Razanamahasoa avy amin’ny MAPAR sy ny depioten'Ambositra Hary Andrianarivo avy amin’ny Mampiray dia tsy namboarina ny tetezana mihazo an’Ambatofinandrahana ao Andranonanakova?
Sandam-bola Tsy mitsaha-mitotongana ny vola Ariary
Hatramin’ny fiandohan’ity taona 2018 ity, izany hoe tato anatin’ny telo herinandro dia nitotongana 120 ny sandan’ny vola Malagasy Ariary mihoatra amin’ny EURO.
Asa fampiorohoroana tany Afghanistan 16 no maty, 26 naratra
Nanatanteraka asa fampihorohoroana indray ny « Etat Islamique » omaly maraina. Akademia miaramila 1 ao Kaboul renivohitr’i Afghanistan no notafihan’izy ireo tamin’ny fandefasana olona nanao vy very ny ainy miisa 5 nanomboka ny maraim-be, ka olona 16 no maty ary 26 no naratra raha ny nambaran’ny Ministeran’ny fiarovam-pirenena any.